Ogaden News Agency (ONA) – ONLF oo Dagaal ku qaaday Fadhisimaha Gumeysiga Qabribayax iyo goobokale
ONLF oo Dagaal ku qaaday Fadhisimaha Gumeysiga Qabribayax iyo goobokale
Posted by ONA Admin	/ March 27, 2012
5 howldaggaal oo lagu fuliyay xeryaha ciidanka Qabribayax iyo garigo’an oo ciidamada gumeysiga lagu jabiyay. Daggaaladan ay ciidamada JWXO bishan gudaheeda ka fuliyeen goobo badan oo Ogadeniya kamid ah ayaa sidan hoose u dhacay.
25kii bishan Maars,2012, ayaa meel u dhow Gerigo’an lagu soo ururiyey ciidan dhowr meelood laysaga keenay oo ah Hawaarin. Amin fiidnimo ah ayey cutubyo Ciidanka ONLF/CWXO ka tirsan hawlgal qorshaysan ka fuliyeen, halkaas oo cadowga wax badan lagaga dilay, qaar badan oo dhaawac ahna ay kala tageen (ONA).
Cidanka ONLF ayaa 5 hawl gal dagaal ka fuliyey saldhigyo ciidanka cadowgu ku leeyahay Q/Bayax iyo hareeraheeda intii u dhexaysay 5tii ilaa 21 kii bishan Maars. Waxaa 5 taas hawl gal lagaga dilay cadowga 55 askari, iyo dhaawac aan tiradiisa la haynin